Abaalmarinta Atlas Logistics | RayHaber | raillynews
HomeAbaalmarinta Atlas Logistics
Abaalmarinta 3 oo laga keenay Atlas Logistics Awards ilaa OMSAN; OMSAN Lojistik ayaa la guddoonsiiyay abaalmarinta 10 Atlas Awards ee ka howlgasha howlwadeennada Saadka Caalamiga ah, Shirkadaha Caalamiga ee Gaadiidka Badda iyo Shirkadaha Gaadiidka Tareenka qeybaha ay ka kooban yihiin Atlas Logistics Awards oo la qabtay sanadkan. [More ...]
Abaalmarinta abaalmarinta Atlas Logistics
Abaalmarinta Atlas Logistics Awards waxay sii wadaa inay ku darto qiimaha magacyada qaybta ee 2018. Dhoofinta shirkadaha ka soo baxay wax ku biiriddooda qeybta saadka [More ...]
OMSAN ayaa abaalmarinta 2 abaalmarin ku siisay abaalmarinta Atlas Logistics
OMSAN Logistics waxaa lagu abaal mariyey laba qaybood oo kaladuwan Atlas Logistics Awards, oo loo abaabulay markii siddeedaad ee sanadkan sannadkan baaxadda Carwada logitrans Fair. 2 oo isku xigta qaybtuna waa qabanqaabiyeyaasha Gaadiidka Caalamiga ah (R8). jeer ee sanadka [More ...]
Abaalmarinta Atlas Logistics Abaalmarinta Mashaariicda Cusub
Waxaa ka haray maalmo kooban in la soo gabagabeeyo Abaalmarinta Atlas Logistics Awards, oo ay saadka iyo waaxda gaadiidku raacaan oo ay kaqeybqaataan daneyn dheeraad ah sannad kasta. Daabacaadda sideedaad ee sanadkan '15-17' ayaa la qaban doonaa inta u dhexeysa November 'International [More ...]
UTIKAD Madaxwaynaha: U Saynis Saynisku wuxuu u qalmaa ATLAS UT
Sannadkan 8. Emre Eldener, Gudoomiyaha Gudiga Fulinta ee UTİKAD iyo xubin ka ah guddiga Abaalmarinta Aasaasiga ee ATLAS [More ...]
Bandhigga Gaadiidka Gaadiidka Logitans Transport
Gawaarida Xajmiga ee Saadka ee Adeegga: 10. Taariikhiyaal caalami ah ee Saadka Gaadiidka ee 16 - 18 Noofambar 2016 taariikhi ah ayaa lagu qabtay magaalada Istanbul. 26 waa cadaalad halka DTD ay ka mid tahay ururada taageera [More ...]
Samsun Logistics Centre waxay heshaa Abaalmarin la'aan
Xarunta saadka ee Samsun waxay heshay Abaalmarin aan furneyn: Sannadkan 10. Xarunta loo yaqaan 'Samsun Logistics Center', oo ka qaybgashay Bandhigga Caalamiga ah ee Saadka ee Saadka, ayaa la guddoonsiiyay abaalmarinta xeerbeegtida qaaska ah qeybta mashruuca ugu wanaagsan. Afar gaadiid [More ...]
Abaalmarinta ATLAS ayaa la soo dhoofinayaa Sannadkan
Abaalmarinta ATLAS ee la siinayo Dhoofintayaasha Sannadkan: Farxadda Atlas Logistics Awards ayaa gaartay heerkeedii ugu sarreeyay. 4 waxaa la bixin doonaa kadib dhamaadka codsiyada bisha Noofambar waxaana xafladda abaalmarinta la qaban doonaa 17 November. [More ...]
6. Abaalmarinta abaalmarinta Atlas Logistics
Ku guuleystayaasha Atlas Logistics Awards guuleystayaasha: 6 sanadkan si isku mid ah LOGITRANS Fair. Tartanka Abaalmarinta Atlas Logistics A, oo la qabtay mar, ayaa la soo gabagabeeyey. Codsadeyaasha ayaa ku dhibtooday inay helaan Atlas Dahab ah. [More ...]
6. Codsiga Diiwaangelinta Abaalmarinta Atlas Logistics waa la sugayaa
Codsiga Diiwaangelinta Daladda Atlas Logistics waa: Tirinta tirinta waxay bilowday 6 ee Abaalmarinta Layliiska. 18-20 Codsiga iyo cod bixinta abaalmarinta abaal-marinta loo soo bandhigi doono kuwa ku guuleysta Fairfans Fair ayaa la qaban doonaa bisha November. [More ...]
Guusha Eren Teknik Otomotiv waa la siiyay
Guusha Eren Teknik Otomotiv waxaa lagu abaalmariyay: Atlas Logistics Awards, oo loo soo bandhigay guusha kooxda 5 sanadkan, Eren Teknik Otomotiv waxaa la guddoonsiiyay abaalmarin gaar ah oo xeerbeegti ah oo leh 'Nidaamyada Nabdoonaanta Shidaalka' [More ...]